Indlela yokuseka isitolo se-intanethi - ii-Geofumadas
Njengoko kumisa online shop
NgoJuni, 2011 Phuma kakuhle, Internet kunye neBlogs, Ukugcinwa kweeblogi
Ngethuba elidlulileyo Ndibaxelele ngoRegnow, isayithi eququzelela indlela yokuthengisa iimveliso kwi-Intanethi kubavelisi, kwiisayithi ezinokusebenza njengeefestile zokubonisa ukuthengwa kwemveliso okanye ukuthengiswa. Ukongezelela, uRegnow unako ukudala izitolo ze-intanethi ukulungiselela ukukhangela nokubonisa iimveliso.
Oku kusebenza kwi-Site Builder. Makhe sibone indlela isebenza ngayo ibonisa umzekelo wokudalwa kwesitolo se-egeomate.
Okokuqala, kufuneka ubhaliswe kunye neRegnow, kwaye kanye phakathi kwakho wenze ubuhlobo. Oku kwenziwa ngokujonga iinkampani zokuvelisa okanye iimveliso kunye nokucela ulwalamanoUkuba inkampani iyamkela ngoko sinokukukhuthaza iimveliso zakho.
Kodwa kukho inani elithile lemveliso engahlali kuyo ulwalamano, ezi ziza kubonakaliswa kwisitoreli kwi-intanethi ngenxa yokukhangela ngecandelo okanye igama elingundoqo.
1. Sebenzisa iSakhiwo seSayithi
I-Site Builder e-Regnow inokushicilelwa kwi-intanethi yale software evumela ukuba wenze isitolo kunye nomxholo onamandla. Xa ukhetha, iphaneli ibonakala ngathi sinokudala amaphepha kwaye siwahlele kwindawo yokudonsa kunye ne-drop-down; luhle kakhulu
Uncedo luphelile, kodwa ngokukodwa umyalelo yilo:
Yakha indawo, qwa lasela iipropati, khetha i template, utshintshe i logo. Oku kwenziwa ngepaneli ephezulu.
Emva koko ukudala kwamaphepha okwenziwa kwipaneli yecala (faka iphepha) kwaye nganye nganye ibonisa iimveliso ezithile okanye uphando olukhoyo njengoko lukhutshwe kakhulu, oluhle kakhulu, i-column column, njl.
Kwakhona kwipaneli engakwesobunxele icwangciselwe kwiKhaya, intloko, ebonisa ukuba yimaphi amaphepha aza kuboniswa kwaye yintoni umyalelo; unokwenza ikhonkco kwi-url ethile uze ufake ukungena kwe-html.
Umzobo olandelayo ubonisa iphepha le-GIS, kunye nemveliso ethile esithembayo iya kubonakala iboniswe, umzekelo Imephu ye-Global Map 12, kunye nokuba sinethemba lokuba inqakraza yokukhuphela, icacise kunye nobukhulu bomfanekiso.
Indawo epheleleyo ingasetyenzwa ngeyure enye. Ukuba iphepha libukeka libi, litshitshiswa kuphela kwaye lenziwe kwakhona; ngokuqinisekileyo uncedo lubanzi kakhulu.
4. Layisha kuyo kumphathi
Ukuyilayisha, sinokubamba indawo ekhoyo; Ingenziwa ngeFTP, nge DreamWeaver okanye ngokuthe ngqo ngumphathi wefayile yeCpanel.
*** Awusebenzi kunye nohlobo lweBlogger lokusingatha
*** Akwasebenzisanga neendawo ezithathwe kwi-WordPress.com, kodwa kunye neziza eziqhutywe kwi-WordPress kwindawo yokubanjwa.
*** Umele ulayishe okubhalwe kwifolda, kungekhona ifolda.
*** Ukuba sifuna ukuyilayisha njengephepha lasekhaya, zonke iifayile kunye neefolda zilayishwa kwi-pubic_html directory; kunye noko, xa ubhala i-domain www.yourdomain.com isitolo siya kuvela.
Kodwa ukuba sifuna ukuyongeza njengesiqendu esiphezulu sekhasi elikhoyo, ngoko senza ifolda kule fayile efanayo (i-public_html), enokuthi zokulanda; ngoko, xa ufuna i-www.tudominio.com/store, ivenkile ye-intanethi iya kuvela.
*** Ngokuxhomekeke kwisitemplate esetyenzisiweyo, kuya kufuneka sidibanise isikripthi se-Google Analytics okanye Woopra ukubeka esweni isithuthi. Ukuba ithemplate ayinayo ikhanda, kuyakufuneka ukuba ufake ikhowudi nganye kwiphepha le-php.
Ukuba nathi sifuna ukuphucula indlela, sinokudala ezingo- okanye i-subdomain evela kumlawuli wokusingatha, kule meko ndisebenzisa iCpanel. Umyalelo endikunika wona kukuba undikholwa downloads.egeomate.com idilesi http://egeomate.com/downloads
Apha ungabona isitolo seGeomate esebenza.
Njengoko uyakubona, i-RegNow ineemveliso ezaneleyo zokukhuphela kwi-CAD, i-GIS, i-Google Earth / i-Maps kunye neNgqungquthela ukuze usebenzise inzuzo kwisayithi. Uninzi lwazo lunokulahlwa njengeenguqulelo zezilingo, kunye nokuphuculwa kweenjini zokukhangela kunamandla kakhulu, ukwenzela ukuba iindwendwe zifike ngokukhawuleza ngeemveliso ezahlukahlukeneyo ngaphakathi lonke ikhathalogu Regnow.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ifowuni ye-Mapper 10, okokuqala ngqondweni
Post Next Inani labasebenzisi be-Intanethi kwihlabathiOkulandelayo "